निर्वाचनमा पार्टी हार्नुको कारणबारे बोले ओली गरे यस्तो खुलासा… – Ap Nepal
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर समिक्षा गरेको छ ।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावमा पार्टीले हार्नुको मुख्य कारण अन्तरघात भएको विश्लेषण सुनाएका छन् ।
उनले चौतर्फी घेराबन्दीको बावजुद पनि पार्टीप्रति जनताले देखाएको समर्थन स्वागतयोग्य रहेको बताएका थिए ।
तर, निर्वाचनमा पार्टी हार्नुको मुख्य कारण नै एमालेभित्र नै अन्तरघात हुनु भएको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले अब पार्टीले अन्तरघातको गम्भीर समिक्षा गर्ने पनि बताए । चुनावी परिणामपछि ओलीले पहिलो पटक बुधबार यसबारे प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
यो पनि…. गत बैशाख १२ गते सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागी एक भुँइमान्छे हर्क साम्पाङले उमेदवारी दर्ता गराउँदै गर्दा कसले पो सोचेको थियो होला र उनीनै हुनेछन् धरानको भावी मेयर, तर निर्वाचनको अन्तीम मत परिणाम आउँदा झट्ट सुन्दा असमान्य लाग्ने नतिजा धरानले निकालेको छ ।
Prevभारी मतकासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवीकी मितिनी मञ्जुदेवी उपमेयरमा विजयी
Nextभारतीय खेलमैदानबाटै बालेनलाई दिए बधाई को हुन त उनीहरू ?
के भन्छन् नेपाल बारमा हाना, हान गर्ने प्रधानन्यायाधीश समर्थक र वि, रोधी दुई वकिल (भिडियो सहित)